Hyiodine (Sodium Haluronate) – Online Myanmar Pharmacy
Hyiodine (Sodium Haluronate)
Pack Size 22g/ 22 ml 50g/ 50 ml
22g/ 22 ml 50g/ 50 ml
Hyiodine (Sodium Haluronate) - is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Hyiodine တွင် အနာကျက်မြန်‌စေရန်တွင်းအားပေးသော Sodium Hyaluronate နှင့် ဘက်တီးရီးယားပိုးများကိုသေစေနိုင်သော Iodine တို့အဓိကပါ၀င်ပါသည်။
Hyiodine ဆေးရည်ကို ဆီးချိုကြောင့်ဖြစ်သောအနာများ၊ Bed Sores အိပ်ယာနာများ၊ ခွဲစိတ်ပြီးနောက်အနာချုပ်ရိုးကွဲထွက်ခြင်းများ နှင့် အနာကျက်ရန်ခက်ခဲသောအရေပြားပျက်စီးမှုများတွင်စိတ်ချစွာသုံးစွဲနိုင်ပါသည်။
Hyiodine isamedical device intended for healingawide range of chronic and acute wounds, including infected wounds. The gel structure makes the product suitable also for healing very deep wounds, cavities and fistulae. Product efficacy is based on the synergistic effect of hyaluronic acid and iodine.